Akụkọ - Ngosipụta nke 2021 nke 11 Shanghai International Automobile Products (APE)
A ga-eme 2021 11 Shanghai International Automobile Products Exhibition (APE) na Shanghai International Expo Center site na June 27th ruo 29th, 2021.
China Shanghai International Automobile Interiors and Exteriors Exhibition (CIAIE) esonyela na ahụike siri ike na mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala China kemgbe ọtụtụ afọ, ma ugbu a, ọ bụrụlarị ngosipụta ọkachamara kachasị ukwuu na nke kachasị emetụta ụwa maka ụgbọ ala na ime ụlọ. Ihe ngosi a gunyere mgbakọ ime na mpụta mputa, oche, ọdụdụ nwere ọgụgụ isi, akụkụ plastik, akụkụ ịchọ mma, wiil na-atụgharị, ogwe ụzọ, elu ụlọ, mkpuchi ahụ, akụkụ ahụ, akụkụ mpụga, elektrọnik kopi, nchekwa nchekwa, bumpers, enyo azụ, ihe ọhụrụ , teknụzụ ọhụrụ, akụrụngwa ọhụrụ, na usoro ọhụụ na ọkụ ọkụ na ọkụ ụgbọala, yana mpaghara ngwa, ga-ekpughere. Ihe ngosi ahụ na-ejikọta agbụ ụlọ ọrụ na ndagwurugwu nke ihe eji arụ ọrụ n'ime ime na mpụga. Ọ bụ nyiwe kachasị mma maka mgbasawanye ahịa azụmaahịa na nkwalite akara, yana ọ bụkwa ikpo okwu maka ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ. Ọ bụ otu nkwụsị ọkachamara maka azụmahịa, teknụzụ na mgbanwe mmụta iji chọta teknụzụ ọhụrụ, ngwaahịa ọhụrụ, ihe ọhụrụ, akụrụngwa ọhụrụ, ma ghọta ohere ahịa. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ngosi ahụ na-anọgide na-ebute ụzọ nke ngosipụta ụgbọala ọkachamara nke ụlọ, na ọnụ ọgụgụ na ogo nke ihe ngosi, ọnụọgụ ndị ọbịa, ọnụọgụ ndị nta akụkọ mgbasa ozi na-eweta iji gbaa ajụjụ ọnụ na akụkụ ndị ọzọ na-ejigide ọtụtụ ndekọ nke ihe ngosi ụgbọala nke ụlọ . Ihe karịrị ndị nrụpụta 2000 sitere na mba na mpaghara 14 gụnyere United States, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Malaysia, Sweden, South Korea, France, Australia, Singapore, China, Hong Kong Special Administrative Region of China na Taiwan sonyere ihe ngosi a Ọ na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala ụwa niile na ndị nrụpụta kachasị elu n'ụwa. Dị ka windo maka "ndozigharị na mmeghe" nke ụlọ ọrụ ụgbọala, ihe ngosi a na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite mgbanwe na imekọ ihe ọnụ nke ụlọ ọrụ ụgbọala na mpaghara dị iche iche, na-akwalite mgbanwe teknụzụ nke ụlọ ọrụ ụgbọala, na imeziwanye ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Bolọ ntu ọ bụla na-enye ihe ndị a: mgbidi, kapeeti, bọọdụ akara ngosi, ọkụ, okpokoro, oche anọ, na nkata akwụkwọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-egosipụta mkpa ịgbazite ihe nkwado ndị ọzọ (enwere ike ịnye ọdịnaya nhọrọ), a ga-ebo ya ebubo dịka ọnụahịa ahụ dị. Ihe ngosi a bu kariri ihe eji aru aru, ya na foto, udi, ihe nlele, wdg.